Uluhlu lweZenzo zoLondolozo lweeNkcazo zezihloko
Iimpawu zokuziphatha ezenzelwe izihloko
Imibuzo yeeNtetho okanye iiPhepha
Ngaba kufuneka uxoxe, uphikisane, okanye uhlolisise umba wokuziphatha kwiklasi yakho? Olu luhlu lwemiba yokuziphatha lenzelwe abafundi. Cinga ngezi zihloko ngentetho yakho esilandelayo okanye incoko, kubandakanywa i-subtopics le mibuzo ingabandakanya.
Ngaba intsha kufuneka ibe nophando lweplastiki?
Ukubukeka kakuhle-okanye ukubukeka kwimizimba ebonakalayo - kubaluleke kakhulu kuluntu. Uyakwazi ukubona iindwendwe kuyo yonke indawo ekunxusa ukuba uthenge iimveliso eziza kuthi ziphucule ukubonakala kwakho.
Kodwa, utyando lweplastiki mhlawumbi ngumtshintsho-mdlalo. Ukuya ngaphantsi kweelayi ukuphucula ubukeka bakho bunobungozi kwaye bunokuba nemiphumo engapheliyo. Cinga ukuba ucinga ukuba intsha - ngubani nje ukuphuhliswa kuba bantu abavuthiweyo-kufuneka babe nelungelo lokwenza isigqibo esinjalo kwisithuba esincinane.
Ngaba ubungakuxelela ukuba ubone ukuxhatshazwa kwezingane ezithandwayo?
Ukuxhatshazwa kuyinkathazo enkulu kwizikolo - kunye nakwihlabathi ngokubanzi. Kodwa, kunokuba nzima ukubonisa isibindi, ukunyuka-kwaye ungene - ukuba ubona ukuxhaphazwa kwezingane ezisesikolweni. Ngaba ubungenza ntoni xa ubona oku kwenzekayo? Kutheni okanye kutheni?
Ngaba ubungathetha ukuba umhlobo wakho wayisebenzisa kakubi isilwanyana?
Ukusetyenziswa kakubi kwezilwanyana ngamancinci kunokufanekisela izenzo ezinobundlobongela njengoko aba bantu bakhula. Ukuthetha kunokusindisa intlungu kunye neentlungu namhlanje - kwaye kunokususa umntu ukuba angabikho kwizenzo ezinobundlobongela kwixesha elizayo. Kodwa, ngaba unokuba nesibindi sokwenza njalo?
Kutheni okanye kutheni?
Ngaba ubungakuxelela ukuba ubone umhlobo wokukopela ekuvavanyeni?
Inkalipho ifike kwiifom ezifihlakeleyo. Ukubona umhlobo ukukopela ekuvavanyeni kungabonakali njengento enkulu enjalo. Mhlawumbi uye waqhatha uvavanyo. Kodwa, ngaba ungathetha-mhlawumbi utshele utitshala - ukuba ubonile wakho umhlobo wakho wokukopela , nangona kunokuthengela ubuhlobo?
Ngaba ngaba ngababhali beendaba baxela iingxelo kwizinto abantu abafuna ukuziva?
Amaphephancwadi - kunye neziteshi zethelevishini zeendaba - ngamashishini, ngokunje nje ngevenkile okanye abathengisi be-intanethi. Kudinga amakhasimende ukuba aphile. Ukuxela iingxelo kwizinto abantu abafuna ukuziva, mhlawumbi, zigcina amaphephandaba kunye neendaba ezibonisa, kunye nemisebenzi. Kodwa, ngaba lo mkhwa wokuziphatha? Ingaba ucinga ntoni?
Ngaba ubungatsho ukuba umhlobo wakho omhle wayenisela kwi-prom?
Uninzi lwezikolo zinemithetho eqinile malunga nokusela kwi-prom, kodwa abafundi abaninzi basenza isenzo. Emva koko, baya kuphumelela ngokukhawuleza. Ukuba ubone umhlobo we-imbibing, ngaba uya kuthi-okanye ujonge ngenye indlela?
Ngaba ngabaqeqeshi bebhola bebhola behlawulwa ngaphezu kootitshala?
Ibhola kaninzi lizisa imali engaphezulu kunoma yintoni enye into enikezelwa sisikolo-kuquka neeklasi zemfundo. Ukuba ishishini linenzuzo, i-CEO ihlala ivuzwa kakuhle. Ngaba akufanele kube yinto efanayo nabaqeqeshi bebhola? Kutheni okanye kutheni?
Ngaba iipolitiki kunye necawa zizahlukana?
Abaviwa bavame ukucela inkolo xa bephuma ngaphandle. Ngokuqhelekileyo indlela efanelekileyo yokutsala iivoti. Kodwa, ukuba umkhuba ukuphazamiseka? I-Conservation, emva koko, ifuna ukuba kubekho ukwahlukana kwecawa kunye nelizwe kweli lizwe.
Ucinga ntoni kwaye kutheni?
Ngaba ungathetha ukuba uvile ilizwi elibi lobuhlanga kwiqela elizaliswe ngabantwana abathandwayo?
Njengemimiselo yangaphambili, kunokuba nzima kakhulu ukuthetha, ngakumbi xa isiganeko siquka abantwana abathandwayo. Ngaba unokuba nesibindi sokuthetha into ethile-kwaye ubeka umngcipheko kwisihlwele esithandwayo?
Ngaba kufuneka uncedise ukuzibulala ukuvunyelwa kwezigulane ezigulayo?
Amanye amazwe, afana neNetherlands, avumele ukuzitshitshisa abantu abancedisayo, njengokuba abanye base-US bathi. Ngaba "inceba yokubulala" kufuneka ibe ngumthetho kubantu abagulayo abagulayo abahlupheke ngokwenene? Kutheni okanye kutheni?
Ukuba ngaba ubuhlanga bokuba ngabafundi bafanele baqwalaselwe ukuvunyelwa kwikholeji?
Kuye kwaba nembambano ende emininzi malunga nendima kufuneka idlale ekwamukelweni kwikholeji. Abaxhasi bezenzo zokumanyanisa bathi amaqela angaphiliyo kufuneka anikwe umlenze phezulu.
Abachasayo bathi bonke abaviwa beekholeji kufuneka bagwetywe ngokwabo kuphela. Ucinga ntoni kwaye kutheni?
Ngaba iinkampani zekhompuyutha zekhompuyutha zidibanise ngasese ulwazi malunga nabaxumi babo?
Lo lukhulu-kwaye lukhula. Njalo xa ungena kwi-intanethi uze u tyelele umthengisi we-intanethi, inkampani yeendaba okanye nakwiziko lovimba bezentlalo, iinkampani zekhomputha zekhompuyutha zidibanisa ulwazi malunga nawe. Ngaba kufuneka babe nelungelo lokwenza njalo, okanye ngaba umgaqo wokuba uvinjelwe? Kutheni ucinga njalo? Chaza impendulo yakho.
Indlela Yokuhlola - Uluhlu lwezihloko
Indlela yokubhala i-Essay argument
Ukubhala Ingqiqo Inqaku
50 Iingxoxo zokubambisana Izihloko
Iidemon zeMormon ziBhedlele Zomoya Zabantu kunye neentsapho
Ukutya okuvela kwiLizwe lamaSilamsi
I-Ethanol Yenziwe Njani?
I-Roses engcwele: I-Symbolism yoMoya yeRose
Ii-Bidenisms: Iimfuno zeJoe Biden kunye neGaffes
I-Anthropology ichazwa: Iingcali zichaza njani uFundo lwaBantu
Ixesha lexesha le-Easter Island: Iziganeko ezibalulekileyo kwiRapa Nui
Imbali yePiano: Bartolomeo Cristofori
Kuthetha ntoni "yiPart" Kuthetha ngesiFrentshi?
Ngaba Udibanisa i-Acid Sulfuric Water okanye iVice Versa?
I-Biography ye-Pericles (c. 495-429 BCE)